Dhageyso Askarta Itoobiya Oo Dhac Baahsan Ka Geystay Gobalka Baay – Calamada.com
Dhageyso Askarta Itoobiya Oo Dhac Baahsan Ka Geystay Gobalka Baay
calamada September 25, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya xarunta gobalka Baay ee Baydhabo ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya dhac baahsan ka geysteen mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi.
Deegaanka dhaca baahsan ay ka geysteen ciidamada Kufaarta Xabahshida Itoobiya ayaa lagu magacaabaa deegaanka Ceel-dhuun oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka magaalada Baydhabo.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa sheegay in Xabashida Itoobiya deegaanka ka geysteen dhac baahsan’iyagoona rartay agab kala duwan oo yaalay guryaha iyo goobaha ganacsi ee deegaankaasi.
Waxyaabaha ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya ka qaateen deegaankaasi waxaa ka mid ah Matoora’Batariyo Soolaro iyo agabyo kala duwan’iyagoona hantiyadii ay ka dhaceen deegaanka la aaday dhanka degmada Waajid ee gobalka Bakool.
Halkan Ka Dhageyso Dadka Deegaanka Ceeldhuun.
Previous: Shil Gaari Oo Ka Dhacay Duleedka Muqdisho.
Next: Dhageyso Jamciyadda Al-ixsaan Oo Gurmad Caafimaad Ka Sameysay Moqokori.